inkombankombane ngodungunyane epulazini - Ilanga News
Home Izindaba inkombankombane ngodungunyane epulazini
inkombankombane ngodungunyane epulazini
KUZE kwafika abakwasidlodlo ngesikhathi umphakathi uxosha izisebenzi ebezihlahla umoba epulazini iBhekamafa, eMandeni.
KUPHAMBANA izinkulumo ngesigameko esiholele ekutheni kusuke udungunyane ngeledlule epulazini iBhekamafa, eMandeni elabuyiselwa emphakathini wuhulumeni ngo-2002 emuva kokuba inkampani okuthiwa yiSimamisa isolwe ngokuhlahla umoba wakuleli pulazi ngokungemthetho.
Ngeledlule umphakathi obuthelwe ngezibonkolo, ugasele epulazini waxosha izisebenzi zeSimamisa ebezihlahla umoba ngoba uthi kazinayo imvume.
Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA like labika kabanzi ngomdonsiswano phakathi komphakathi neSimamisa ngaleli pulazi. Umphakathi ubusola iSimamisa ngokuqhubeka nokusebenza kuleli pulazi yize isivumelwano sokuba ihlahle umoba sesaphela.
Kuze kwavela nokuthi ngesikhathi le nkampani isebenza kuleli pulazi, kunemfuyo eyalahleka. Njengamanje leli pulazi liphethwe ngumlawuli, uMnu Maqhawe Zondo owaqokwa emuva kokuba ikomiti lalo laphelelwa yisikhathi.
UMnu Prince Dube oyilungu lomphakathi ebelikhona ngesikhathi kuxoshwa izisebenzi epulazini, uthi baqale ukusola ukuthi kukhona okushaya amanzi ngesikhathi kusha umoba.
“Siqoqene siwumphakathi sanikela khona epulazini ngoMsombuluko. Sizithele ezisebenzini zihlahla umoba, sazimisa sabuza ukuthi zithunywe ngubani. Zithe zithunywe yiSimamisa.
“Sizitshelile ukuthi kazivumelekile ukuhlahla umoba ngoba isivumelwano sokusebenzisana siphele ngoNdasa (March) wango-2018. NgoLwesibili siphindelile epulazini siyogada, kuthe sisahleli sabona sekutheleka amaphoyisa.
“Siwatshenile ukusuka nokuhlala kodaba. Kube sekufika esinye isikhulu samaphoyisa satshela umphakathi ukuthi lezi zisebenzi zinemvume yokusebenza kuleli pulazi. Kusixakile lokho ngoba akekho onemvume yokusebe-nza kuleli pulazi.
“Sisatshiswe ngokuthi sizoboshwa uma siqhubeka nokuvimba izisebenzi. Besifuna ukwazi ukuthi iSimamisa yayithola kubani imvume yokusebenza ngoba akekho ophumela obala ngalokho,” kusho uMnu Dube.
UMnu Zondo okunguyena obheke indaba yokusebenza kwepulazi uthe akekho umuntu onelungelo lokusebenza kulona.
“Ngizwile ngento eyenzeke eBhekamafa ngoMsombuluko, engingakusho nje wukuthi akekho umuntu onenkontileka yokusebenza kuleliya pulazi, laba abahlahla umoba bakwenza ngokungemthetho lokho,” esho
UMnu Mark Dunlop weSimamisa okuthiwa nguyena onakekela lo moba ukuze ukhule kahle usole uMnu Dube ngokuba yiqola elidle imali yaleli pulazi lihlangene nabanye abantu.
Uthe inkantolo yakhipha isinqumo sokuba baqhubeke nokusebenza kuleli pulazi kuze kuba ihhovisi likasomaqhuzu (master) likhetha ikomiti elizomela umphakathi kuleliya pulazi.
“UDube ehlangene nabanye abantu babesekomitini elidala baxoshwa ngoba besolwa ngokukhwabanisa uR-1.7 million. Lokhu abakushoyo kokuthi sisebenza ngokungemthetho ngama-nga aluhlaza,” kusho yena.
Mayelana nezinsolo ezivezwe nguMnu Dunlop zokukhwabanisa u-R1.7 million, uMnu Dube uthe uma kuwukuthi wayekhishelwe inkohlakalo kuleli pulazi, kungani pho engaboshwanga.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa abizwa kuleli pulazi ko-dwa wathi alikho icala elivuliwe. skhom@ilanganews.co.za
Previous articleahlafuna ejeqeza amakhansela “asongelwayo”
Next articleUhlinze ingane (5) yomfowabo